Ximan & Xeeb si rasmi ah u saxiixday dhismaha maamulka Gobollada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 August 2014 7 August 2014
Mareeg.com: Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa kazoo dabcay feker uu horay u qaatay oo uu ku diiday qaabka dowladda Soomaaliya u dooneyso in loo dhiso maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaasoo ka koobnaan doona labo gobol oo kala ah Galgaduud iyo Mudug.
Munaasabad lagu dhameystirayay saxiixa maamul u sameynta gobolada Galgaduud iyo Mudug oo lagu qabtay Xarunta madaxtooyada Soomaliya ayaa waxaa goob joog ka ahaa ku simaha madaxweynaha Dalka ahna Guddoomiyaha golaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed, Guddiga Wasiirada ahaa ee ku howlanaa maamul u sameynta goboladaasi iyo wakiil gaarka ah ee Qaramada Midoobay U Qaabilsan Soomaaliya Nickolas Kay, iyo marti sharaf kale waxaana soo dhaweeyay hishiiska Ra’isul Wasaaraha Dalka iyo ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaana saxiixa kaddib hadal uu jeediyay Madaxweyne Ximan iyo Xeeb C/laahi Cali Maxamed (Baarleex) ku boggaadiyay heshiiska isagoona tilmaamay in wada hadal dheer kaddib maanta la dhameystiray heshiiskii Maamul u sameynta Gobollada Dhexe.
Ku-simaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa ku tilmaamay heshiiska ay gaareen dhinacyadani inuu yahay horrumar iyo tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka dib-u- heshiisiinta iyo asaaska nidaam federaal ah oo ay yeelato Soomaaliya, waxana uu xusay in dhammaan golayaasha Dowladdu wadajir ay u taageerayaan heshiiskan in uu taabo galo.
“Waxaan bogaadin dadaalka xukuumaddu ay dalka uga hirgalinayso nidaamka fedeeraalka.Waa jiri karaan caqabado iyo is qab qabsi marka wax la dhisayo, laakiin taas waxa kaliya oo lagu xallin karaa wadatashi, wadahadal iyo gorgotan dhex mara dhammaan dhinacyada ay wada khusayso. Hawshaan way adkayd, laakiin ugu dambeyntii miro dhal ayay noqotay taas oo ku timid dadaal wadashaqayn ah iyo is qancin ku dhisan, kulligeenna waan ku faraxsannahay natiijada laga gaaray wada hadalkii iyo isqancintii”